जिउँदो खेलाडीलाई कान्तिपुर टिभीले मृत्यु भएको घोषणा गरिदिएपछि.. – MySansar
फुटबल हेरिरहेका सबै दर्शक स्तब्ध हुने एउटा घटना भयो आज कोपनहेगनमा भइरहेको युरो कपको खेलका क्रममा। डेनमार्क र फिनल्यान्डबीच खेल भइरहेको थियो। मध्यान्तर हुन पाँच मिनेट जति बाँकी थियो। डेनमार्कका स्टार खेलाडी क्रिस्टियन एरिक्सन आफूकहाँ बल पास हुँदा एकाएक ढले। त्यसपछिका केही दृश्य साह्रै मार्मिक थिए। डेनमार्कका सबै खेलाडीहरुले चारैतिरबाट उनलाई घेरे। ताकि कुनै पनि क्यामेराले त्यो ह्रदयविदारक दृश्य खिच्न नसकोस्। सिपिआर दिइयो। मेडिकल टिम आए। उनीहरुले पर्दाले छोपेर एरिक्सनलाई स्ट्रेचरमा राखी मैदानबाट निकाले। मैदानबाट बाहिरिँदासम्म उनको होस आइसकेको थियो। धन्न समयमै सिपिआर दिए र मैदानमै एउटा अप्रिय घटना हुनबाट जोगियो। तर सात समुद्रपार नेपालको एउटा प्रमुख मिडिया भने अप्रिय घटनाबाट जोगिन सकेन।
कान्तिपुर टेलिभिजनको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डल @ourktv मा एरिक्सनको मृत्यु भएको घोषणासहितको ट्विट गरियो। अचम्म ! मृत्यु भएको समाचार कतै पनि आएको थिएन। तर कान्तिपुर टिभी मृत्यु भएको समाचार दिन हतारियो।
यो डेनिस फुटबल टिमको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डल हो। उतैको भाषामा गरिएको यो ट्विटको अङ्ग्रेजी अनुवाद यस्तो छ- Christian Eriksen is awake and his condition remains stable. He remains hospitalized at Rigshospitalet for further examinations.
अर्थात् एरिक्सन होसमा छन् र उनको अवस्था स्थिर छ। उनको थप उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।
त्यसैगरी युएफाले पनि ट्विटमा उनलाई अस्पताल लगिएको र अवस्था स्थिर रहेको बताइएको थियो।
मैदानबाट अस्पताल लाँदै गर्दाको उनको फोटोमा पनि उनी होसमै देखिन्छन्-
तर कान्तिपुर टिभीले मृत्युको घोषणा गर्न हतारियो। कान्तिपुर टिभीकै पत्रकारले त रिपसम्म लेख्न भ्याए
हतार किन ?
अनलाइन पत्रकारिताको ट्रेनिङ हुँदा र अरु बेला पनि म बारम्बार भन्ने गर्छु- ए बाबा हतार किन? अनलाइनमा ज्यादै हतार गरिन्छ। पहिलो हुनु राम्रो त हो तर विश्वासिलो हुनु त्यो भन्दा राम्रो हो। हतारको नाममा गलत सूचना दिनुभन्दा एक छिन पर्खेर सही सूचना दिँदा राम्रो। अझ मृत्यु जस्तो विषयमा त झन् संवेदनशील हुनुपर्छ। यो त अझ नेपालको पनि होइन, विदेशको घटना हो। विदेशकै कुनै मिडियाले लेखिनसक्दै मृत्युको समाचार राखेर जित्ने कताको मिडियालाई हो?
गल्ती हुन्छ। तर गल्ती भएपछि त्यसबाट सिक्दै भविष्यमा त्यसो हुन नदिने पाठ सिक्नु उचित हुन्छ। तर यो ब्लग तयार पार्दासम्म कान्तिपुर टिभीले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमा गलत ट्विट गरेवापत् माफी मागेको देखिएको छैन। मृत्युको त्यो ट्विट केही समयपछि हटाइएको थियो। तर इन्टरनेटमा एक पटक राखिसकेको कुरा कहाँ मेटिन्छ र !
अपडेट : कान्तिपुर टिभीले ११ बजेर २२ मिनेटमा ट्विट गर्दै माफी मागेको छ
#Eurocup2020 अन्तर्गत डेनमार्क र फिनल्यान्डबीचको खेल 'मेडिकल एमर्जेन्सी'का कारण स्थगित। खेलको ४० औं मिनेटमा डेनमार्कका खेलाडी क्रिष्चिटियन एरिक्सन एक्कासी लडेका थिए। एरिक्सनको उपचार जारी।
[यसअघि पोस्ट भएको ट्वीटका लागि क्षमाप्रार्थी छौं]
— Kantipur TV HD (@ourktv) June 12, 2021
3 thoughts on “जिउँदो खेलाडीलाई कान्तिपुर टिभीले मृत्यु भएको घोषणा गरिदिएपछि..”
The medical doctor who attended him in the hospital said, he revived not survived, meaning he was dead practically and was brought back dur to Emergency Treatment. That isadead situation if that happened in country like ours. So the reporter is right inaway – medically he was dead for sometime. Contextually, he would have been dead if that was the case here.
नाताबाद र कृपाबाद बाट तानिएका पत्रकार तथा कर्मचारीको परिणाम आफ्नो कर्म गर्न असक्छ्यम कठै
Miruna Thapa says:
राष्ट्रको नम्बर एक टिभी च्यानल हुनु जो छ, बिचरा ।